यी तीन ‘पति’ जससँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डराउँछन् – Halkaro
यी तीन ‘पति’ जससँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डराउँछन्
प्रकाशित मिति : २०७३, ३१ चैत्र बिहीबार April 14, 2017
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीन वटा पतिसँग डराउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनलार्इ यी तीन पतिले सँधै झस्काउने गरेको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा नेपाली भट्ट नियुक्ती गरेका उनले यो निर्णयबाट एक हप्तामा नै पछि हट्नुपर्यो ।
उनी पशुपतिसँग अझै पनि उत्तीकै डराउँछन् । त्यति मात्र होइन उनी राष्ट्रपति र सेनापतिसँग पनि उत्तिकै डराउने गरेको अाँफैले खोलेका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले यी तीनै पतिलार्इ चलाएका थिए । त्यतिवेलाको डर अझै उनको मनमा छ । अझै आफूलाई यीत तीन पतिले झस्काउने गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयमले स्वीकारेका हुन् ।
पशुपतिको मूल भट्ट भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने परम्परा तोड्दै प्रचण्डले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपाली नागरिक डा. विष्णु दाहाललाई मूलभट्ट नियुक्त गरेका थिए। उनले ७ दिनमात्र जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए। यसको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो।
यस्तै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि प्रचण्डले गरेका थिए। राष्ट्रपतिले त्यसलाई उल्ट्याइदिएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
त्यसैले यी तीन ‘पति’का कारण प्रचण्डको राजनीतिक क्रेज घटेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ। त्यतिबेला आफैँले पशुपतिको मूलभट्ट नियुक्त गरेका डा. दाहालको पुस्तक ‘पशुपतिमा सात दिन’ विमोचनका क्रममा बिहीबार प्रधानमन्त्रीले यस्तो स्वीकार गरेका हुन् ।
‘म थोरैथोरै झस्किन्छु पनि। म पशुपतिको बारेमा कुरा गर्न पनि झस्किन्छु, म राष्ट्रपतिको बारेमा कुरा गर्न पनि झस्किन्छु, र म सेनापतिको बारेमा कुरा गर्न पनि झस्किन्छु,’ उनले भने, ‘सात दिनको अनुभूति अगाडि सार्ने क्रममा एउटा ठूलो वैचारिक विमर्श अगाडि सार्नुभएको छ। पुस्तकले यसबारे नेपालीहरुको सोचलाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।’ उनले यस्तो बताइ रहँदा हलमा हाँसोले गुञ्जिएको थियो ।
‘कुरा के प्रस्टै हो भने, चाहे पशुपति, चाहे राष्ट्रपति, चाहे सेनापति तीनवटैमा मैले नेपाली जनताको भावनालाई नेपाल राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘हुनसक्छ मैले धेरै ढंग पुर्‍याउन सकिन होला। तर, मेरो भावना पवित्र थियो।’
‘खाली शक्ति सन्तुलनको स्थितिलाई हेरेर अलि कलात्मक हुन सायद त्यतिबेला जानिनँ होला,’ प्रचण्डले थपे, ‘मैले अहिले राष्ट्रवादका ठूला कुरा गर्ने साथीहरुका कुरा, लोकतन्त्रको निकै चर्को कुरा गर्नेहरुका कुरा धेरै नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ ।’
← समुद्र किनारमा ब्रिटनीको हट अवतार
नयाँ वर्षमा राजनीतिक दलप्रति पूर्व राजाले बोले धावाः राजनीतिक संवाद राजनीतिमा मात्र केन्द्रीत जनताको समस्या उस्तै →